Capacitance dia ny fandrefesana ny matetika amin'ny 1 kHz ± 20 Hz ao anatin'ny fiviliana tsara sy ratsy (raha lehibe noho ny 1 microfarad capacitance) ny fitsapana matetika dia 120 Hz), ary ny mari-pana fandrefesana dia 25 oc ± 5 ° C. Ny fenitra ny fiviliana dia ± 10%.
Ny fatran'ny dissipation na TANσ dia ny tahan'ny capacitor ESR sy ny reactance. Fandrefesana matetika amin'ny 1 kHz ± 20 Hz (Raha ny fitsapana matetika dia 120 Hz dia lehibe noho ny 1 microfarad, ny mari-pana fandrefesana dia 25 oc ± 5 ° C, Tsy lehibe noho ny voafaritra sandany.
Ny fanoherana ny insulation ho an'ny capacitors naoty mihoatra ny 0.25 hatramin'ny 0.5 microscopy, ny fiovana dia miankina amin'ny vokatra (MΩ • μF) amin'ny sandan'ny fanoherana kely indrindra (MΩ) avy amin'ny capacitor kely indrindra (MΩ). Rehefa afaka roa minitra amin'ny 100V DC malefaka sy 25 ± 5 ° C, ny insulation fanoherana dia tsy mety ho kely noho ny RC vokatra na ny naoty fanoherana sanda.
Volavolan'ny naoty dia ny voltase mitohy ambony indrindra amin'ny fampiasana tena izy ny mari-pana miasa ambony indrindra amin'ny fampiasana tena izy.
Ny tanjaky ny dielectric dia ny tanjaky ny tendrony ambony indrindra azon'ny capacitor amin'ny mari-pana amin'ny efitrano nomena. Azo refesina amin'ny alàlan'ny fampiharana ny sandan'ny volavolan-tsofina voatondro amin'ny alàlan'ny voltase 100 Ω mandritra ny iray minitra. Ohatra, mba handrefesana ny capacitor karazana DPM, ny sandan'ny voltase naoty dia 250V DC, ny tanjaky ny dielectric dia 175%, ary ny tanjaky ny dielectric dia takiana mba hotsapaina amin'ny 438 V DC.
Fitsapana fiainana : Amin'ny mari-pana ambony indrindra ± 3 ° C, ny voltase ampiharina amin'ny capacitor dia ampiharina amin'ny 500 na 1,000 (+72, -2) ora. Tsy maintsy misy endrika tsy misy fahasimbana ary ny sandan'ny capacitance dia miova tsy mihoatra ny ± 5%. Ny resistor insulation dia tsy latsaka amin'ny 50% amin'ny fetra voalohany. Ny fahaverezan'ny fatiantoka dia tsy mihoatra ny fetra voalohany.
Ny fahaiza-manaon'ny Pulse dia fahaiza-manao amin'izao fotoana izao. Io capacitor io dia tapa-kevitra ny tsy fivadihan'ny eo noho eo, izay asehon'ny DV / DT naoty sanda, izay ny ambony indrindra azo avela naoty fiovana (V / μs vondrona). Ny tampon'isa nomena amin'izao fotoana izao (AMPS) dia mitovy amin'ny vokatra ny capacitor sanda nomena (μF) sy DV / DT naoty sanda: Ipk = C (dV/dt)
Fanontana marika amin'ny isa, sandan'ny capacitance (μF), fahasamihafan'ny fahafaha-manao (%), mpamokatra, ary volavolan-tena (DC sy AC voltage). Ny kapasitera kely habe dia tsy afaka manana karazana, mpamokatra (HVC), capacitance (PF), ary code deviation capacitance. Ohatra: "DLMCD" sy "682k" dia maneho ny modely DLM, 6800 pf (2 dia 0), ary 10% ny fetran'ny fandeferana.
Ny code rehefa mampiasa ny deviation dia toy izao manaraka izao: